Call_Somali – Welcome United
KAA HORTAGIDA DIB UCELINTA, IYO KALA SOOCIDDA ISKUULKA –
XORRIYADDA HORUMARKA IYO XUQUUQDA LOOGU TALAGALAY DHAMMAAN!
Wac si aad uga soo horjeeddo ficilka ka dhanka ah cunsuriga ee magaalada Hamburg, September 29, 2018
Wadajirka oo ka soo horjeeda cunsuriyada
Waxaan ognahay horaantii Sebtember 29, 2018 inuu noqon doono maalinta ugu quruxda badan sanadka. Waxay noqon doontaa
ha noqotee maalintaas. Waxaannu nahay dad badan, waannu ka duwan nahay, maalin walbana waannu leenahay albaabkayaga. Waan qaban doonaa
dhammaantood waxay isu imanayan Sebtembar. Waxaan ku iman doonnaa Hamburg, baabuur, tareen iyo bas. Laga soo bilaabo
tuulooyinka iyo magaalooyinka, laga bilaabo xeryaha iyo hoyga, laga bilaabo dadaallada soo dhaweynta iyo gargaarka
ururada, goobaha dhismaha, dugsiyada iyo jaamacadaha. Iyadoo lagu furi dono heesaha,
riwaayadaha, muusigga waxaan ka tirtiri doonaa qabowga, cunsuriyadda iyo
qalbi la’aan ka timid waddooyinka magaalada. Wadajir ayaan uga qaadaynaa sawirka wadooyinka:
sawirka saaxiibtinimadeena, sawirka nolol kala duwan oo an lahayn cabsi waxan mujinayna wadajir in aynu nahay markan
dhaqaaqaano, adduunka ayaa dhaqdhaqaaqaya!
Sheekooyinka loo soo sheego maalin kasta waa kuwo aan loo dulqaadan karin. Waxay yihiin cay, oo waxay yihiin been.
Waxay yiraahdaan qaxootigu waa dhibaatada inta ay ku dhinteen badda Mediterranean. Waxay yiraahdaan
xaddidaadda “awoodda isdhexgalka” ayaa la gaaray, iyada oo cunsuriyadeed ay ka dhacaan Bundestag
iyo waddooyinka aan xaddidneyn. Waxay xisaabiyaan in “kharashka isdhexgalka” ay yihiin
kor u kaca, inta aan la diidin koorasyada luqadda iyo shaqada iyo lacag badan ayaa lagu kharash gareeyaa
xafiiska masaafurinta iyo dhibaataynta. Waxay ka hadlaan rabshadaha – carruurtu waa
Inay afduubaan xaqqa sariiraha iyo fasallada dugsiyada si ay si buuxda u masaafuriyaan
Way sahlan tahay in la isku tuuro oo laga saaro, sababtoo ah dad badan oo naga mid ah ayaa ugu hooseya. Wanay ka so cararayan
dagaal, gaajo, saboolnimo iyo murugo. Qaar badan oo naga mid ah ayaa kay yimid sababtoo ah caasimadda caalamka burburisay
nolosheena. Qoysaskeena ma imaan karaan sababtoo ah jacaylka iyo niyaddeenu maaha mid muhiim ah.
xukuumadda ayaa qorshaynaysa inay xirto xudduudaha ayna naga dhigto xeryo cusub. Xaqiiqdii ma rabno inaan niyad jabno,
Waxaan nahay aadanaha, dhibanayaasha. Laakiin waxaan dhihi karnaa: Dhammaan tani waxay muujineysaa sida dimuqraadiyada dimuqraadiyad dhab ah
doomaha ku yaala badda Mediterranean oo halis u ah inaga oo dhan, laakiin cunsuriyadeeynta cunsuriyada iyo
dilida dhammaan Yurubta.
Aynu sheegno dhibaatada: waa cunsuriyad!
Sanadkii 2017, in ka badan 3,000 oo qof ayaa ku dhintay ama la waayay Badda Mediterranean sababtoo ah iyaga
isku dayay in uu gaaro Yurub. Dhimashadooda ayaa ahaa mid si weyn uga hadashay wararka. Dhimashadu way sii jirtaa
tiro an la magacaabin. Jarmalka, 2,200 oo weerar oo lagu qaaday hoyga qaxootiga ayaa isla xilligaa la sheegay
mudo. 180 jeer taageerayaal qaxooti ayaa la weeraray. Muslimiinta iyo hay’adaha Muslimiinta ah
waxaa la weeraray 950 jeer. 1,453 dembiyo naceyb ah ayaa la diiwaangeliyey. In ka badan 5.5 milyan
Codbixiyeyaasha xaqa u leh ee doorashadii guud ee ugu dambeysay ayaa u codeeyay midabtakoorka furan ee AfD. lakin aniguna ma samayn doono
waxay illowday NSU mudo dheer, taas oo awooday in ay dilaan dadka aan sanna dilin.
Taasi waa waxa aan ka fekereyno marka la ogaanayo in Jarmalku uu sii kordhayo
halis oo. Aynu si daacad ah u hadalno – kuwaas oo fadhiya hoyga iyo maqlo marka daaqadaha ay yihiin
Habeenkii? aya lagu dhibaateeyay xafiiska socdaalka? waxana lagu istcimaali karaa
shaqooyinka sharci darrada ah iyo tababarro aan la bixin waxanay nadiifiya , musqulaha iyo guryaha? Ay ku noolyihin waxay shaqeeya mudo toban sano ah walina wali waa “martiqaad” kaliya? Maya, annaga noo ma aha
dhammaadkii adduunka oo isdaba jooga, sababtoo ah AfD hadda waxay awood u leedahay inay gasho Bundestag
Runtu way ka duwan tahay!
Hadda kor ayaan u qaadnaa. Mar labaad iyo hubaal maaha markii ugu dambeysay. Ka horinimadno ciqabta midab-takoorka, ka dhanka ah
dunidan caajis ah, oo ka soo horjeeda waddankan qalbi-xumada ah, kasoo ka horjeeda bulshada
siyaasadda kala sarista bulshda kala qaybin. Haddii u “Jarmal” yahay ama
“ajnabi”, ay tahay “qaxooti”ama dhalad haddii ay ka imanayaan Dortmund ama Damascus, laga bilaabo
Afrika ama Athens, laga bilaabo Kabul ama Kassel: Taasi maaha arrin mudo dheer. Maya, waa
dhamaanteen nagu saabsan. Waxay ku saabsantahay bulshadeena aan rabno inaan wada noolaano.
Waxaan mar hore bilaabney in aan dhisno adduunyo kale. Waxaynu ku bilaabanay nafteena. Albaabadayadu waa
furanyihin. Wax kasta, waan wada ognahay, waxaan haynaa lambarradayada,
waxaanu ku dhignay dhibco nololeed oo xiriir ah iyo macluumaad, waxaan noqonay khubaro iyo
saaxiibo. Hawl kasta oo aan wada qabanno, innaga oo taageerad wadaagno waxaynu heleynaa
xoog cusub. Ha ahaato maamulka, ha ahaato mid ka mid ah duufaanta badda ee shaqada
bartamaha, guriga ama guriyaaha.
Ma joojin doonno inaan la dagaallanno dhismayaasha cusub iyo kan cusub ee awoodda iyo nidaamka adduunka
ee gumeysiga. Waxaan difaacnaa jirkeena iyo sharafteena – ka dhanka ah galmada, cunsuriyada
jeexa xududaha iyo in la xidho xuduudaha!
in aynu wada kulanno waa muhiim wana weyn wayneed. “so dhawayti ” Berlin
Sebtembar 2017 wuxuu ahaa dabaaldeg iyo bilowgii. Waxaan u muujinnay codkayaga
iyo xuquuqdeena, laakiin waxa ka sii muhiimsan – annaga ayaa dib u soo cusbooneysiinay: waxanan
noqon kara.oo muujinnay in aan u guuri karno magaalooyinka iyo xaafadaha, asxaabteena iyo
deriska, xuduudaha iyo horudhaca. Aan sii wadno
Taasi waa sababta aan u dooneyno in aan dib u midoobno xaflad weyn oo ka dhan ah cunsuriyadda kuna xojino midnimada. Waa
waxaa laga yaabaa inay noqoto wakhti , qabow iyo cunsuriyad. Waxaa jiri kara waqtiyo qurux badan; laakiin tan
Waqtigaagu waa keena. waxa loo baahan yahay in u dhaco. Waxaan nahay dad badan – iyo in ka badan
inta aan ka fikirno.
Waxaan ku baaqeynaa dibadbax guud oo caalami ah 29- 2018 kii September ee magaalada Hamburg.
Ku soo biir lugta ka qaybgalka, xuquuq isku mid ah, iyo midnimo!
Waaxa iman doonaa wadajirkena!